विश्वकपमा अस्ट्रेलियाको दवदवा समाप्त, ८ विकेटको सानदार जित सहित इंग्ल्याण्ड फाइनलमा ! | Diyopost
विश्वकपमा अस्ट्रेलियाको दवदवा समाप्त, ८ विकेटको सानदार जित सहित इंग्ल्याण्ड फाइनलमा !
काठमाडौँ, असार २६ । आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा इंग्ल्याण्ड विजयी भएको छ । पाँचपटक सम्म विश्वकप क्रिकेटको उपाधी चुमेको अस्ट्रेलियालाई ८ विकेटले पराजित गर्दै इंग्ल्याण्ड २३ बर्षपछि फाइनलमा पुगेको हो ।
अस्ट्रेलियाले प्रस्तुत गरेको २ सय २४ रनको लक्ष्य इंग्ल्याण्डले ओभर बल खेलेर विकेटको क्षतिमा भेट्टाएको हो । इंग्ल्याण्डको जितमा जेसन रोयले सर्वाधिक ८५ रनको योगदान गरे । उनले ६५ बलमा ९ चौका र पाँच छक्कासहितको विस्फोटक प्रहार गरे । रोय र अर्का ओपनर जोनी वेयरस्टको साझेदारीले १ सय २४ रनको योगदान गर्यो । जोनीले व्यक्तिगत ४३ रन बनाए । निकै उत्कृष्ट शुरुवाती गरेको इंग्ल्याण्डले अस्ट्रेलियाको आक्रमक बलिङलाई सहज रुपमा चिर्न सफल भएको छ ।
जीतका लागि इंग्ल्याण्डका जोय रुटले ४९ रन बनाउँदा कप्तान इयोइन मोर्गनले ४५ रन बनाए । घरेलु मैदान र दर्शकको फाइदा उठाउँदै इंग्ल्याण्डले अस्ट्रेलियामाथि सहज जित निकालेको छ ।
बलिङमा अस्ट्रेलियाका पाट कमिन्स र मिचेल स्टार्कले एक एक विकेट लिए ।
टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलिया ४९ ओभर खेलेर २ सय २३ रनमा समेटिन पुग्यो । जारि विश्वकपमा निकै लयात्मक ढंगले खेलिरहेका कप्तान एरोन फिञ्च र डेविड वार्नरले आजकोे खेलमा निकै निराशाजनक प्रदर्शन गर्दा अस्ट्रेलियाले हार ब्यहोरेको हो ।
कप्तान फिञ्च शुन्य रनमै आउट भए भने डेविड वार्नर ९ रन बनाएर पवेलियन फर्के । खेललाई पुनरागमनको जिम्मेवारी पाएका म्याक्सवेल र स्टोइन्सले समेत क्रमश शुन्य र २२ रनमा आउट भएपछि अस्ट्रेलिया फराकिलो लक्ष्य बनाउनमा चुकेको थियो । स्टिभ स्मिथले ८५ रनको योगदान गरेपनि फराकिलो लक्ष्यमा भने पुग्न सकेन ।
निकै आक्रमक बलिङमा उत्रिएको इंग्ल्याण्डका तर्फबाट एदिल रसिद र क्रिस ओक्सले समान तीनतीन विकेट लिए । त्यस्तै जोफ्रा आर्चरले २ विकेट लिएभने मार्क वुडले १ विकेट लिए ।
जितसंगै इंग्ल्याण्डले फाइनल खेलमा न्युजिल्याण्डसंगको भेट पक्का गरेको छ । न्युजिल्याण्ड यसअघिको विश्वकपको उपविजेता हो भने सन् १९९६ देखि इंग्ल्याण्ड पहिलोपटक फाइनलमा पुगेको हो । इंग्ल्याण्ड र न्यूजिल्याण्डबिचको फाइनल खेल आगामी जुलाई १४ मा हुनेछ ।